ठूला स्तन भएकै कारण बलिउडमा छाईरहेका छन् यी ६ अभिनेत्री, यिनीहरुलाई देखेपछि जो कोही पनि हुन्छ फिदा !
असार ०७, २०७५ BNNTV
एजेन्सी । बलिउडका केहि नायिकाहरु आफ्नो फिगरका कारणले चर्चित छन्। चाहे त्यो नेचुरल होस् या सर्जरी गरिएकै किन नहोस्। यद्यपी, बलिउडमा केहि यस्ता अभिनेत्रीहरु छन् जसले बिना कुनै सर्जरी प्राकृतिक रुपमै ठूला र आकर्षक बक्षस्थल पाएका छन्।
यी नायिकाहरुले यसकै ( आकर्षक बक्षस्थल) कारण लाखौँ मानिसहरुलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सफल भएका छन्। यी अभिनेत्रीहरुलाई ठूला स्तन भएकै कारण फ्यानहरुले मन पराउने गर्छन्। आज हामी तपाईलाई यस्ता अभिनेत्रीहरुका बारेमा जानकारी दिन जाँदैछौं जसले बिना कुनै सर्जरी प्राकृतिक रुपमै निकै आकर्षक र ठूला बक्षस्थल पाएका छन्।
आफ्नो हाट फिगरबाट बलिउडमा चर्चित छिन् मल्लिका सेरावत। उनले हर कोही पुरुषलाई पनि आफूतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने खुबी राख्छि न् ।
आयिशा टाकिया बलिउडमा त्यति धेरै जम्न त सकिनन् यद्यपी उनको फिगरको आज पनि चर्चा हुने गर्छ। आयशा पनि बलिउडमा ठूला र आकर्षक स्तनका कारण चर्चित छिन्।
पोर्न स्टार हुँदै बलिउडमा प्रवेश गरेकी सनी लियोनीको फिगर मन नपराउने पुरुष सायदै होलान्। सन्नीका स्तन पनि बिना कुनै सर्जरी नै ठूला र आक्रसक पनि रहेका छन्।
सलमान खानको फिल्म वीरबाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी अभिनेती जरिन खान आफ्नो सुन्दरताका कारण बलिउडमा चर्चित छिन्। त्यसमाथी पनि उनका पुष्ट र आकर्षक बक्षस्थलका कारण धेरै पुरुष फ्यानहरु फिदा हुने गरेका छन्।
हट र बोल्ड फोटो सुटका कारण चर्चामा आइरहेने अर्की मोडल तथा नायिका पुनम पाण्डे पनि ठूला बक्षस्थलकै कारण चर्चित छन्। उनका इन्स्टाग्राममा पनि थुप्रै फ्लोअर्सहरु रहेका छन्।
कायनात अरोडा सधै आफ्नो हट र बोल्ड आवतारका कारण चर्चामा आउने गर्छन्। कायनात २०१५ देखि कुनै पनि फिल्ममा नआएकी भए पनि उनको चर्चाको भने कुनै पनि कमि छैन। कायनातका ठूला र निकै आकर्षक स्तन हेर्नकै लागि पनि पुरुष फ्यानहरु हाल सम्म जाने गर्छन्।
प्रकाशित : बिहिबार, असार ०७, २०७५१८:५२
‘पण्डित बाजेको लौरी’ मा सन्ध्या केसी ‘बदिनी’ [ट्रेलर भिडियो]
शाहरुखले गरे यस्तो खुलासा: मृत्युपछि बच्चाको नाममा पैसा नछोड्ने, यस्तो छ कारण
राजकुमारी झैँ सुन्दर छिन् सलमानकी भान्जी ! सलमानले छिट्टै डेब्यु गराउने ! [ तस्विरसहित ]
नायक पल शाह किन बने त नेपाली ट्रोलको शिकार (पुरा जान्नुहोस्)
नाइट क्लबमा यस्तो अवस्थामा भेटिए प्रियंका र निक, भिडियो बन्यो भाइरल!
५ बलिउड सेलिब्रेटीहरू जसले आफ्नो बचपनको साथिसँग गरे विवाह!
गलत तरिकाबाट छोएको भन्दै यी ४ नायिकाले नायकहरुलाई खुल्लम-खुल्ला हानेका थिए झाप्पड !
५७ मिनेट अगाडि बिगुल